Cardano, Tron, Cosmos, Wasidee Xaalkooda Iyo Qiimaha La Is Oran Karo Juunyo 20.. – Kiribto Somali Media
Cardano, Tron, Cosmos, Wasidee Xaalkooda Iyo Qiimaha La Is Oran Karo Juunyo 20..
Todobaadkan bitcoin oo ah lacagaha kiribto, kan ugu tunka wayn, ayaa qiimaha la kala siisto, darbi adag kala kulmay, $9.500 taas oo keyntay, in qiimihiisa uu hoos udhac sameeyo, isla markaana lacago fara badan oo kiribto ahna, hoos ula dhacaan oo todobaadkaan waxay lagaha altcoin,la dhaho qaar kood u ahayd, xili adag marka laga reebo Cardano, Tron, Cosmos, oon, si wayn qiimo dhac looga dareemin.
Cardano ama (ADA)
Qiimaha la kala siisto, koynka Cardano, ayaa todobaadkan laga ar kayey isbadal dhinaca qiimaha ah, oo kor iyo hoos ukala dhaq’dhaqaqayey,waxana qiimihiisi hore uu lumiyay, kodhawaad ilaa 8% dhinaca sarifka, xiligan aan warbixintaan qoreyno, waxaa la kala siisanayaa, ADA $0.079 lacagta guud ee koynka ku jirtane waa $2, bilyan, waxuu koynku darbiyo ka heystaa dhinaca hoose $ 0.071 halka dhinaca korane, uu darbi kale ka helayo, ilaa $ 0.089 oo ah darbi ku yara adag haduu koynku dhafana rajo wanaagsan leh.
Garafka looyaqaan, Bollinger Bands, ayaa tilmamaya marka si qota dheer loo eego dhincyaadiisa kala duwan, lana raaciyo RSI,ga oo dhinaca kale sheegaysa qaliyoobida,koynka in hada cardano joogo eeriyada qiimaha dabiigi ah,
Dhanka kale madaxa shirkaa IOHK Charles Hoskinson ayaa sheegay, in cardano iyo hor umaradiisa dhinaca teknolojiyada, soo xoogeysanayso, isla markaane ka sara mari karaayo, Ethereum dhinaca hor umarka, marka loo eego, iyo waxqabadka intaba.
Koynka Tron oo safka suuqa lagacaha kiribto kaga jira nambarka 17’aad lacagta ku jirtana tahay xiligan $1 bilyan, todobaad ahane, wuxuu hoos udhacay ilaa 12%, oo hoos wuxuu gaaray ilaa $ 0.0158, xilgan aan warbixinta qoreyno, Tron waxuu ka ag dhowyahay, darbiga hoose ee $ 0.0151 waxana jira darbiyo kale, oo dhinaca hoose koynka uu heli karo, sida $ 0.011 ilaa $ 0.018.
Garafka looyaqaan RSI’ga marka loo eego, waxan arki kareynaa in uu koynku ku sii socdo eeriyada, qaaliyoobida taas oo kalifi karta in koynku soo raqiisoobo, hayeshee hadane MACD’ga garafka ladhaho ayaa tilmaamayo, mid la mid ah garafka kore waxaa laga yaabaa in Tron uu hoos udhac la kulmo.
Waxana jiro warbixin balshada kiribto,la isla dhax mareyso, oo tilmamaya marka ay noqoto, dhinaca hor umarka, iyo shaqalaha ka shaqeeya, hor umarka koynanka, Tron EOS iyo BCH kaluu bar howlihii hor umarineed, ee koynankan, shaqaaliyihii ka shaqeyn, lahaa, sanadkan hoos udhac, xoogan ku yimid.
Marka la eego xaalka Atom waxaa dareemeyaa in garafyadu hoos udhac timamayaan, xiligan cosmos waxaa la kala siisanayaa, $ 2.5, wuxuuna todobaad ahan hoos usoo dhacay, ilaa 7%, wuxuu hada ka agdhow yahay, darbiga $ 2.4, haduu darbigan, ka soo hoos maro, waxuu kaloo darbi ka heli karaa $ 1.8, balse haduu koynku, helo fursado waxaa laga yabaa in qiimhiisa dhinaca sara ukaca uu tagi karo ilaa $ 3.1.
Garafka looyaqan EME RIBBONS xiligan, wuxuu tilmamaya in darbiga kore ee koowaad koynku ka heysto adkaansho, wanaagsan, balse MACD’ga garafka ladhoho, ayaa isna tilmamaya in ay dhici karto, in qiimo dhac koynku la kulmi karaayo.
Bilowgii bishan ayey ahayd marka shirkada Kava decentralized finance project, ay blockchainka Cosmos, ku soo bireen oo dadku awoodan, in lacagtooda ku badashaan, iyagoo xiranayo, dayna, ku sameynaya koynka BNB hadhowna dib usoo celinkara, koynkay sameyeen, qadanayana lacagtii hore ee Meesha ay ku xirteen. Taas oo kor dhineysa, dhaqaalaha dhaxmaraya koynka Cosmos, oo qaab dowladeedd camal u shaqeyn karaya.
Bitcoin oo sariflayasha qiimaha kore kudoonayan oo soo xoogeystay ma jari doona $8.000
Bitcoin waa u xal awooda quwad luminta wax gadasho ee lacagta dollar’ka